Mashi 2019 | Londoloza Isitimela
Inyanga: Mashi 2019
Ikhaya > Mashi 2019
Sokugubha uSuku LweNkosi In The Netherlands (yeNkosi)
Isikhathi sokufunda: 5 amaminithi Sokugubha uSuku LweNkosi eNetherlands ukuze kube kuhle iqembu best eHolland. On 27 April, bagubha usuku lokuzalwa King Willem-u-Alexander-ngomculo, amaqembu emgwaqweni, izimakethe zigcwele, futhi Fairs fun. Inkosi uqobo lwayo enqamula izwe nomkhaya wakhe. Ngobusuku obandulele…
Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Holland, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi ENetherlands, Izikhangibavakashi Europe
5 Izizathu Isizathu Sokuba Thembela On zemininingwane Ticket yokubhuka Amawebhusayithi
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi Ubusika sekuzophela futhi sasehlobo is engqongqoza emnyango futhi lesi yisikhathi lapho ohlela amaholide lwakho oluzayo. Sonke sifuna indlela engabizi kakhulu yokuhamba futhi uma ufuna indlela engcono kakhulu yalokho…
Business Travel ngu zemininingwane, Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi YaseBrithani enibusisiwe bedla ujantshi inethiwekhi okuyinto uye wathonya nomlando wayo bomphakathi kanye nasekuthuthukiseni umnotho ukuze kuzuze izizukulwane. Futhi uma Umthandi womculo wesitimela, iholidi UK wesitimela kusiza imisebenzi elithakazelisayo ezindaweni yonke indlela esuka Aberdeen ukuba Penzance. Ngakho-ke uma inhliziyo yakho isethiwe…
Disneyland Vacation In Paris Phakathi Winter Futhi Summer
Isikhathi sokufunda: 5 amaminithi ngokuvamile Disneyland Paris ungowokuqala ngamazwe Disney Ipaki kubalandeli abaningi ukuvakashela. Ingabe ufuna ukwazi indlela ohlela okungcono Disneyland iholide Paris ngesikhathi ihlobo nobusika? Khona sokuza kwakho endaweni efanele! Akhiwe Marne-la-Vallee, idolobha lase…
isitimela intsha, Qeqesha Ukuhamba eFrance
Izindawo zokudlela Chinese EYurophu
Isikhathi sokufunda: 4 amaminithi Evumelana okubabayo futhi echichima flavour Amazing, ukudla Chinese ezinhle KUNZIMA ngezinye izikhathi ukuthola eYurophu. Nokho, izindaba ezinhle wukuthi kukhona okukhulu zokudlela Chinese eYurophu - une ukwazi kuphi, futhi kanjani lapho….
Ukuhamba Ngezitimela, Qeqesha Ukuhamba i-Austria, Qeqesha Ukuhamba EBelgium, Qeqesha Ukuhamba Italy, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi ENetherlands, Izikhangibavakashi Europe
I 6 Kumele Zama Izidlo Austria
ngu U-Elizabeth Kawamura
Isikhathi sokufunda: 7 amaminithi Lezi imicabango yami ukudla esihle kunazo zonke engake wajabulela, ngesikhathi uhlala lami e-Austria. Ngangiba khona ehlobo 2016 inyanga-4-internship yami ngesikhathi wosayizi omncane NGO wendawo. Okuhlangenwe nakho internship sasisikhulu kangangokuba, ukuthi ngifanele ngihlangane nabanekhono…
Qeqesha Ukuhamba i-Austria, Izikhangibavakashi Europe
Okuhambayo Ukuze Strasbourg ngu zemininingwane
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi Lapho isihambi ukhuluma ngokuvakashela France, iningi labantu lingavumelana kweso cabanga Paris. Nokho, France dolobha akulona idolobha kuphela kuwufanele ngokuvakashela kuleli zwe elihle, Ukuya Strasbourg yiyona IN entsha. nakwezinye izindawo Ziningi njengabafanelwe ukwazisa bonke…